Undelete Photos si Kaadị ebe nchekwa
Ụzọ ọ bụla undelete foto site na a na kaadị ebe nchekwa?
Olee otú undelete foto ndị si na kaadị ebe nchekwa?
1 ụzọ ọ bụla undelete foto site na a na kaadị ebe nchekwa?
m na mberede ehichapụ foto niile si m igwefoto na, n'eziokwu m chọrọ naanị ehichapụ otu na anya adịghị mma. Ma ugbu a niile foto maka New Afọ Iv na Christmas na-ehichapụ. Kasị njọ, foto site na a na-adịbeghị anya tconvert ka British Virgin Islands usọrọ anyị papa 70 ụbọchị ọmụmụ na-arahụ! Kedu ihe m kwesịrị ịme! Ụzọ ọ bụla undelete foto site na kaadị ebe nchekwa? Enyemaka ọ bụla ga-enwe oké ekele!
Ụda maara? Nke a fọrọ nke nta na-eme onye ọ bụla. Ya mere, anaghị masịrị ya. Na ị bụghị nanị, na e nwere ụzọ n'ezie-enyere gị aka undelete foto ndị si kaadị ebe nchekwa.
Ihe kacha mkpa na ị ga-akpọ n'ime obi gị na-: Kwụsị ewere ihe ọ bụla photos ozugbo na gị igwefoto ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ na-ejide kaadị ebe nchekwa gị. The ohere nwere site na ehichapụ photos-na na-akara dị ka free ọhụrụ photos. Ọ bụrụ na ha na-agaghị overwritten site ọzọ faịlụ, ị nwere ike mfe naghachi ha. Ya mere, ọ bụ nnọọ mkpa ịnọgide na-kaadị ebe nchekwa gị mbụ mgbe ị furu efu gị photos. Ọzọ, ka ego otú naghachi ehichapụ faịlụ site na kaadị ebe nchekwa gị na nzọụkwụ.
2 Olee otú iji undelete foto ndị si na kaadị ebe nchekwa?
E wezụga na-echebe gị na kaadị ebe nchekwa ọma, ị kwesịrị a foto undeleting ngwá ọrụ inyere gị aka ịchọta azụ gị ehichapụ foto. I nwere ike ịgbalị Wondershare Photo Recovery, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac ma ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS X. Nke a foto mgbake-akwado ndị niile nkịtị formats maka gị foto, nakwa dị ka mgbake si dị iche iche ngwaọrụ dị ka igwefoto, camcorder, iPod, USB mbanye, na ekwentị mkpanaaka, music ọkpụkpọ, na ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ị nwere ike nweta free ikpe version ike iṅomi gị furu efu foto na ịhụchalụ ha otu otu na-elele àgwà tupu ị na-akwụ maka ya.
Ị nwere ike undeleted foto site na kaadị ebe nchekwa n'agbanyeghị na ị furu efu ha ruru ka:
»Mmadụ na mberede ehichapụ faịlụ site na kaadị ebe
nchekwa» formatted na kaadị ebe nchekwa
»kaadị ebe nchekwa ọkọdọ emerụ ma ọ bụ
keerughi» Ike odida
ọrịa» Ndị ọzọ
Naanị 3 iji undelete foto site na kaadị ebe nchekwa dị Windows ma ọ bụ Mac
Step1. Jikọọ kaadị ebe nchekwa gị ma ọ bụ igwefoto na kọmputa na-eme ka n'aka na kaadị gị nwere ike achọpụtara. Na-agba ọsọ usoro ihe omume ma họrọ kaadị gị ike iṅomi.
Step2. Mgbe scanning, ifiọk na-akwado ma ọ bụrụ na gị chọrọ faịlụ na-achọta.
Step3. Ego foto gị na-amalite na-agbake.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na kaadị ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa echiche.
Olee otú Naghachi Lost Images si PC, Igwefoto, kaadị ebe nchekwa & USB
> Resource> Kaadị ebe nchekwa Data Recovery> Olee otú iji undelete Photos si A Kaadị ebe nchekwa